तथ्यांंकमा महिला : सबैभन्दा धेरै कुन प्रदेशमा ? - तथ्यांंकमा महिला : सबैभन्दा धेरै कुन प्रदेशमा ?
तथ्यांंकमा महिला : सबैभन्दा धेरै कुन प्रदेशमा ?
२०७५, २6 भदौ, 05:13:51 AM
काठमाडौं । मुलुकको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । धेरैलाई चासो हुन सक्छ, महिला र पुरुषको असन्तुलन सबभन्दा धेरै कुन प्रदेशमा छ रु
३ नम्बर प्रदेशका ३९.१ प्रतिशत महिला सातामा कम्तीमा एक दिन भए पनि पत्रिका पढ्छन् । आमसञ्चारमा सबैभन्दा कमजोर पहुँच कर्णाली प्रदेशका महिलामा रहेको छ । यस प्रदेशमा जम्मा ५ प्रतिशत महिला मात्रै पत्रिकामा पहुँच रहेको छ भने २८.५ प्रतिशत महिलाको रेडियोमा पहुँच देखिन्छ ।
सबै प्रदेशभन्दा थोरै अर्थात् १२.७ प्रतिशत महिलाको टीभीमा पहुँच रहेको छ भने सबै प्रदेशभन्दा कम अर्थात् २.५ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चार माध्यममा पहुँच रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशकै जस्तो कमजोर अवस्था प्रदेश २ का महिलाको पनि देखिन्छ । यस प्रदेशका जम्मा ५.७ प्रतिशत महिलाले साताको एकपटक पत्रिका पढेको देखिन्छ भने २७.७ प्रतिशत महिलाले रेडियो सुन्ने र ४९.६ प्रतिशत महिलाले टेलिभिजन हेर्ने गरेको देखिन्छ ।
यो प्रदेशका जम्मा ४.१ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चारमा पहुँच रहेको छ । तीनै थरी सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा कम पहुँच भने कर्णाली प्रदेशका महिलामा रहेको छ । उक्त प्रदेशमा जम्मा २।५ प्रतिशत महिलाको मात्रै तीनै थरी सञ्चार साधनमा पहुँच छ ।
कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगमा पनि समग्रमा नेपाली महिलाको कमजोर पहुँच रहेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका कुल २१.७ प्रतिशत महिला कम्प्युटर र कुल १९.६ प्रतिशत महिला इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ का ४४.९ प्रतिशत महिलाको कम्प्युटरमा पहुँच रहेको छ भने सबभन्दा कम पहुँच अर्थात् ६.१ प्रतिशत प्रदेश ६ का महिलाको छ ।
भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिताका विजेतालाई लैनो भैँसी, पुरुष र महिला कुस्ती प्रतियोगिता सम्पन्न